Isiteyitimenti sabucala-GBL Yurophu BV
Malunga ne-GBL Yurophu BV
I-GBL i-Europe BV ihambelana noMthetho woKhuseleko lweDatha i-1998 (DPA) kunye neMigaqo yoNxibelelwano lwaBucala kunye ne-Elektroniki (Imiyalelo ye-EC), kunye noMmiselo woKhuseleko lweDatha ngokubanzi, owaziswa ngoMeyi 2003.
Lo mgaqo-nkqubo wabucala usebenza nakweyiphi na iwebhusayithi eyeyabasebenzi neqhutywa yi-GBL Europe BV.
Loluphi ulwazi esiluqokelelayo ngawe?
Siqokelela ulwazi kuwe xa ugqibezela naluphi na uhlobo lokubhalisa / ubhaliso nathi, nokuba kukwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi, ngokunxulumene neemveliso kunye neenkonzo zethu, kubandakanya (kodwa kungaphelelanga apho): ukufumana iincwadana zethu ze-imeyile; ukubeka naluphi na uhlobo lwentengiso kunye nathi; okanye ungene ekuthengiseni nathi.
Ulwazi oluqokelelweyo lungaquka: igama lakho, idilesi ye-imeyile, idilesi yeposi, inombolo yomnxeba, isihloko somsebenzi, kunye neenkcukacha zoku-odola.
Sirekhoda ukuhlangana kweleta zeendaba zethu ze-imeyile (ezinje ngokuvulwa nokuchofoza) ukusinceda ukuba sivavanye ukusebenza konxibelelwano lwethu nawe.
Xa undwendwela iwebhusayithi yethu, ulwazi oluthile lunokuqokelelwa ngokuzenzekelayo kwisixhobo sakho. Olu lwazi luninzi lubandakanya: Idilesi ye-IP, uhlobo lwesixhobo, inombolo ye-ID yesixhobo, iminwe, ulwazi lokungena, uhlobo lwesikhangeli kunye nenguqulelo, ixesha lokusetwa, inkqubo yokusebenza kunye neqonga, indawo yendawo, kunye nolunye ulwazi lobuchwephesha.
Sinokuqokelela ulwazi malunga nendlela isixhobo sakho esiye saqubisana ngayo newebhusayithi, kubandakanya amaphepha afikeleleyo, imihla yokundwendwela kunye nexesha, ubude betyelelo kumaphepha athile, ulwazi lokudibana kwiphepha, kunye nolwazi lokufumana.
Sinokuqokelela ulwazi kuwe ngokwahlukileyo xa ufikelela kwiintlobo ezithile zomxholo, njengamaphepha amhlophe okanye incoko yencoko yokuhlala, okanye xa ungena ukhuphiswano okanye uphando olupheleleyo.
Ukuba ubhalisa, iprofayile yakho inokunxulunyaniswa nedatha erekhodwe ngaphambili kwintsebenzo yendawo.
Ludibana njani ulwazi?
Ngqo xa iakhawunti yomsebenzisi yenziwe.
Ngandlela thile, ngokukhangela imikhwa, ukusetyenziswa kwewebhu kunye nokunye.
Sebenzisa ukusayinela intlalontle- Unokukhetha ukwenza iakhawunti usebenzisa iprofayile yoluntu esele ikho. Uza kubuzwa ukuba uyonwabile na ukwabelana ngolwazi olusisiseko nenkqubo yethu ukuze ugcwalise iinkcukacha zeakhawunti.
Ulwazi lwewebhusayithi luqokelelwa kusetyenziswa iicookies (jonga ngezantsi).
Siza kuyisebenzisa njani ulwazi ngawe?
Siqokelela ulwazi ngawe ukuze uhambise iimveliso kunye neenkonzo zethu kuwe ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo. Sisenokuthi, amaxesha ngamaxesha, sinxibelelane nawe ngeposi, ngomnxeba okanye nge-imeyile ngokubhekisele kwezinye iimveliso kunye neenkonzo esicinga ukuba zingangomdla kuwe, nokuba zivela kwi-GBL Europe BV okanye kwezinye iinkampani kwiqela leenkonzo ze-BL ze-Europe.
Sisebenzisa ulwazi oluqokelelwe kwiwebhusayithi ukwenza ubuntu bakho baphinde batyelele iwebhusayithi yethu, kunye nokuqokelela idatha ngeenjongo zokuhlalutywa kweenkcukacha manani.
Asisayi kuze sabelane nabanye ngolwazi lwakho ngaphandle kwemvume yakho yangaphambili.
Kukho iimeko ezithile, ezinje ngokufikelela kwiindidi ezithile zomxholo weprimiyamu (umzekelo iphepha elimhlophe okanye iphepha lewebhu), xa siyakudlulisa kwiinkcukacha zakho kumntu wesithathu. Uya kusoloko ubuzwa ukuba uyavuma ukwenza la manyathelo ngokwahlukeneyo kwaye ngalo lonke ixesha, kwaye unokukhetha ukungafikeleli kumxholo ukuba awufuni ukuba iinkcukacha zakho zabiwe.
Ukuba ukhethe, njengenxalenye yobhaliso lwakho, ukufumana izibonelelo ezithile kunye nolwazi kubantu besithathu, singakuthumela ulwazi, nge-imeyile, egameni leqela lesithathu elikhethiweyo. Kulezi meko, i-imeyile yakho ayabiwa nabani na, kwaye nayiphi na i-imeyile enjalo iya kuza ngqo kuthi.
Ukuba ukhethe ukufumana ezo zinto zikhethekileyo kunye nolwazi ngeposi kunye / okanye ngomnxeba, iinkcukacha ezifanelekileyo (nokuba zedilesi yeposi okanye inombolo yomnxeba kuphela) ziya kwabelwane ngokusetyenziswa kwexesha elinye nomntu wesithathu ekuthethwa ngaye. Abo bantu besithathu banyanzelekile ukuba basayine isivumelwano kunye nathi sokuqinisekisa ukuba nayiphi na idatha enjalo isetyenziselwa injongo enye kwaye ayisasetyenziswanga kamva okanye ekwabelwana ngayo.
Ukufikelela kulwazi lwakho kunye nezinto ozikhethayo
Bonke abathengi ababhalisiweyo kunye nabo bonke abafumana iileta zeendaba zethu ze-imeyile bane-akhawunti nathi. Iakhawunti yakho ikuvumela ukuba ukhethe loluphi ulwazi olufumanayo kuthi, kwaye ulufumana njani olo lwazi. Ungaphuma kuyo nayiphi na incwadana yeendaba ngamanye amaxesha.
Ukungazikhupheli kunye nelungelo lakho lokulibaleka
Ukuba awusafuni ukufumana nantoni na kuthi, iinketho zakho zezi zilandelayo:
Jonga ibhokisi 'Ungazikhupheli' kwiakhawunti yakho. Siza kuzigcina iinkcukacha zakho, kodwa kuphela kukuqinisekisa ukuba ucinezelwe kulo naluphi na olunye uluhlu esinokulufumana kamva. Awusayi kufumana naluphi na unxibelelwano oluvela kuthi.
Ukuba ufuna ukusebenzisa ilungelo lakho lokulibaleka, kuya kufuneka uthumele i-imeyile info@gbl-europe.com kwaye ucele ukuba iakhawunti yakho icinywe ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba singasayi kuba nayo irekhodi lakho kunye neenkcukacha zakho, kunokwenzeka ukuba kamva sinokufumana iinkcukacha zakho njengethemba (phantsi 'kwenzala esemthethweni'), kwaye ke ngenxa yoko unokufumana ulwazi kuthi kwixesha elizayo .
Iicookies zisetyenziswa kwiwebhusayithi yethu (s) ukubonelela ngamava angcono omsebenzisi. Oku sikwenza ngokubeka ifayile yokubhaliweyo encinci kwisixhobo sakho ukulandelela indlela oyisebenzisa ngayo iwebhusayithi, ukurekhoda okanye ukungena ngemvume ukuba uyibonile imiyalezo esiyibonisayo, ukugcina ungene kuwebhusayithi, apho kufanelekileyo, ukulandelela ukufikelela, kunye nokubonisa Izibhengezo okanye umxholo.
Ezinye iicookies ziyafuneka ukonwabela kwaye zisebenzise ukusebenza ngokupheleleyo kwewebhusayithi yethu (ii).
Iiwebhusayithi zethu ziqulathe ikhonkco kwezinye iiwebhusayithi. Lo mgaqo-nkqubo wabucala usebenza kule webhusayithi nakwezinye iiwebhusayithi ezingabanini be-GBL Europe BV. Ukuba, xa undwendwela iwebhusayithi ye-BL ye-Europe BV, ucofa ikhonkco kwiwebhusayithi yomntu wesithathu, kuya kufuneka ukhathalele ukufunda umgaqo-nkqubo wakhe wabucala, onokuthi wahluke kakhulu kowethu.
Utshintsho kwimigaqo-nkqubo yethu yabucala
Sigcina umgaqo-nkqubo wethu wabucala siphantsi koqwalaselo rhoqo kwaye siya kubeka naluphi na uhlaziyo kweli phepha. Lo mgaqo-nkqubo wabucala wagqitywa ukuhlaziywa kwi-08 Agasti 2018.
Nceda unxibelelane nathi ukuba unemibuzo malunga nomgaqo-nkqubo wethu wabucala okanye ulwazi esibambe malunga nalo:
I-8471 XM Wolvega